Xisbiga Wadajir oo dib u bilaabay ololaha doorashada(Masawirro)
Wednesday August 18, 2021 - 22:19:13
Xisbiga Wadajir ayaa dib u bilaabay ololaha doorashada iyadoo xisbigu dib ugu dhejiyey Boorar jidadka waaweeyn iyo isgooysyada magaalada muqdisho. Boorarka hogaamiyaha xisbiga Wadajir ahna murashax Madaxweeyne Mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa si weeyn loogu arkayaa waddooyinka caasimadda iyo goobo…
Wednesday July 03, 2019 - 00:35:15
Xisbiga Mucaaradka ah ee Wadajir ayaa xaflad si weeyn agaasimay eeyna kasoo qeeyb galeen madax badan ku qabtay magaalada Muqsiho.
Tuesday April 02, 2019 - 01:37:09
Wafdi ka tirsan Xisbiga Wadajir oo uu hogaaminayo Murashaxa madaxweeyne ee Xisbiga ayaa wada hadalo la yeeshay madax ka tirsan dalka Masar.
Wednesday November 07, 2018 - 02:43:36
Xisbiga	Wadajir	wuxuu	walaac	wayn	ka	muujinayaa	hufnaanta	hay'adaha	maaliyadda	dalka.	Qoraalka	ka	soo	baxay	xafiiska	Xisaabiyaha	Guud	wuxuu	cadeyn	u	yahay